Mividiana fanomezana tany am-boalohany tany New York (I) | Vaovao momba ny dia
Rehefa mandeha manao dia lavitra ny olona dia fomba fanao kely izay tiantsika hotanterahina amin'ny fividianana fanomezana kely na fahatsiarovana ho an'ny olon-tiantsika. Fomba iray anehoana azy ireo fa teo anilanay mandrakariva izy ireo, satria teo izahay nandritra ny dia. Tsy isalasalana fa fifaliana ho an'ireo manana fanomezam-pahasoavana izany ary tsara tarehy ianao rehefa avy nitety.
Raha iray amin'ireo olona tsy te hitondra ilay fanomezana mahazatra tsy misy fantatrao hitehirizana ianao dia rehefa mandeha any Nueva ianao York manadino ny mividy sombin-kazo milaza hoe 'izaho Love NY ', mety ho lasa tany am-boalohany sy hafa kokoa ianao. Raha te hanavao ny fanomezam-pahasoavana ianao dia vakio hatrany raha hijery ireo magazay sasany izay ahitanao zavatra tsy mahazatra, izay ahafahanao mividy fanomezana ho tian'ny fianakavianao sy ny namanao.
2 Vaovao Star Movie
3 Record Colony sy Radio Center
5 Fivarotam-boky antiquarian mpizaha tany feno
6 Fivarotana komik
10 Firavaka Pippin Vintage
11 Fiainana sy orinasa telo
Toerana mety hividiananao ny fanomezana tsara indrindra ho anao ary tsy hitovizanao dia ao amin'ny West Village. Toerana misy fivarotana maro samy hafa sy manintona ity. Misy magazay manana anarana voalohany: Mxyplyzyk izay ahitanao fanomezana be dia be amin'ny vidiny lafo. Fa raha tsy dia tianao loatra ity magazay ity dia misy maro manerana an'ity faritra ity hahitana izay tadiavinao.
Vaovao Star Movie
Raha mpitia sarimihetsika ny namanao na ny fianakavianao na mihevitra ny tenanao ho mpankafy sarimihetsika maty ianao, dia mila mandeha any amin'ny magazay ianao Movie Star Vaovao. Eto amin'ity toerana ity ianao dia afaka mahita fanomezana be dia be ho an'ireo mpijery sarimihetsika toy ny afisy sarimihetsika, sary sns.
Record Colony sy Radio Center
Raha ankoatry ny sinema dia misy sakaiza sy fianakaviana tianao mozika ary koa sinema, dia tsy ho adinonao ny mijanona eo amin'ny fivarotana Colony Record sy Radio Center., fivarotana CD's izay hita ao amin'ny 1619 Broadway (akaikin'ny Times Square) ary toerana ahafahan'ny mpitia sarimihetsika sy teatra mankafy mankafy noho ny fahafahan'izy ireo miditra amin'ireo kapila rehetra amin'ny lalao Broadway tsara indrindra.
Ankoatry ny mpitia sarimihetsika na mozika dia azo atao ihany koa fa ny namanao sy ny fianakavianao dia tia mamaky teny. Amin'izay dia afaka manome boky manokana azy ireo ianao avy amin'ny fivarotamboky mahafinaritra any New York. Afaka mankany The Drama Book Shop izay iray amin'ireo fivarotam-boky manan-kaja amin'ny sinema sy teatra.
Fivarotam-boky antiquarian mpizaha tany feno
Raha boky tsy dia mampino no tadiavinao, dia tokony handeha amin'ny laharana 199 Madison Avenue ianao hitsidika ny fivarotana The Complete dia lavitra Antiquarian fivarotam-boky, hahita boky mahatalanjona amin'ny fiteny samihafa ianao.
Nefa tadidio fa raha ny zavatra tadiavinao dia tantara an-tsary na fivarotana boky misy boky fitsangatsanganana, any New York dia manana fivarotam-boky tsy manam-petra amin'ity karazana ity ianao, amin'izay azonao eritreretina hoe iza amin'izy ireo no manakaiky kokoa ny toerana misy anao na avy amin'ny toerana misy anao mijanona ary mividiana tantara an-tsary voalohany.
Ity magazay any Brooklyn ity dia fivarotana iray hafa izay ahitanao fanaka sy zavatra fahagola sy faharoa. Izy io dia fanangonana eklekitika ho an'ny haingon-trano, fa sombiny vitsivitsy sarotra hita any an-kafa. Fivarotana iray izay feno harena tranainy sy voangona. Ny zavatra ho hitanao indrindra dia ny fanaka indostrialy, ny jiro ary ny singa efa mihoatra ny zato taona, na dia afaka mahita singa maoderina aza ianao.
Nisokatra tamin'ny taona 2005 ity magazay New York City ity ary manana akanjo sy haingo be dia be ho an'ny trano maoderina, saingy singa mamorona sy maoderina izy ireo. Afaka mahita fanomezana ho an'ny fianakavianao sy ny namanao ianao. Ireo entana ho hitanao dia afaka miainga amin'ny akanjo ka hatramin'ny firavaka ary kilalao ho an'ny ankizy. Mila miditra fotsiny ianao ary misafidy ireo entana tianao indrindra entina miaraka aminao… tsy ho fantatrao izay tadiavinao!
Any New York koa io fivarotana io ary mety hahagaga anao. Rehefa miditra ianao dia mety hahatsapa ho toy ny trano kokoa noho ny magazay izay azonao ividianana entana. Ny hevitr'ity magazay ity dia ny hivarotra entana amin'ireo mpividy ambony izay maniry entana lafo be. Nanomboka nivarotra ondana sy ondana ny orinasa fa ankehitriny kosa dia toerana hahitana haingon-trano: fanaka, zavatra, firavaka ... amin'izao fotoana izao dia mivarotra entana ho an'ny teti-bola rehetra ary manandrana manao ny entany ho mpamorona sy tsy manam-paharoa.
Firavaka Pippin Vintage
Raha firavaka no tianao hividy dia tsy tokony hohadinoinao ny mijanona amin'ity magazay ity ao afovoan'i New York izay mampifangaro ny hatsarana sy ny glamor. Ao amin'ity magazay ity dia hahita entana tsy manam-potoana ianao fa feno tantara koa. Afaka mahita kavina, kofehy, rojo, haba ianao, peratra volamena, volafotsy na metaly tsy dia lafo nefa sarobidy. Azonao atao koa ny mahita vokatra vita amin'ny hoditra toy ny kitapo, poketra, fonon-tanana, satroka na kojakoja hafa.
Fiainana sy orinasa telo
Mpanoratra maro no mivarotra boky be any amin'ny fivarotana boky tsy miankina. Na dia somary mifandraika aza ny fahombiazana ara-bola dia ilaina fa raha tianao ity karazana famakiana ity dia tonga amin'ity magazay ity ianao. Rehefa miditra amin'ity magazay boky ity ianao dia hadinonao fa amin'ny fiainana maoderina izay fahita matetika ianao.Te hahita boky manokana momba ny lohahevitra mahaliana anao indrindra ianao. Ho hitanao ny boky foronina, boky manampy ny tenany na karazana famakiana hafa toy ny torolàlana momba ny dia, fomba fahandro, tononkalo sns.
Ity lisitry ny magazay ity dia ohatra kely fotsiny amin'ny fivarotana isan-karazany izay hitanao any New York. Manana fivarotana maro araka izay tianao an-tsaina ianao, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny mieritreritra izay karazana fanomezana tany am-boalohany tianao hovidiana Avy eo, eritrereto ny karazana magazay mifanaraka amin'ny fitadiavanao. Amin'ity fomba ity dia hialanao amin'ny havizanana tsy ilaina ary ho hitanao haingana araka izay tratra ny fanomezam-pahasoavana nomenao. Na dia mazava ho azy aza, tsy heveriko ho reraka ianao mitady fanomezana ho an'ny havanao, iza no tsy tia miantsena any New York? Aza hadino anefa ny manitsy ny teti-bolanao mba tsy hihoatra ny vidinao ary hankafizanao ny fividiananao nefa tsy hanenenanao avy eo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Mividiana fanomezana tany New York (I)